Zavamaneno Fitendry: Henoy Ny Feo Mamolivoly Fanahy, Avy amin’ny Tontolo Hafan’ny Yaybahar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2015 15:56 GMT
Görkem Şen mitendry ny Yaybahar, ny Ranomasina Marmara Sea no ery an-damosina. Antenainy ity zavamaneno ity fa ho fampiasan'ny rehetra toy ny lokanga ihany. Sary: Natolotr'i Görkem Şen
Ity lahatsoratra sy tatitra anaty onjampeo Dalia Mortada ho an'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ny 19 Aogositra 2015, ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Ao Tiorkia, misy zavamaneno iray vaovao noforonina, izay manome feo toa avy aminà tontolo hafa mahavolivoly sy toy ny feonà lazera. Antsoina hoe Yaybahar izy io, ary fitendry fotsiny. “Synthetizer tena izy mampiasa tady, fitendry ity,” hoy ny fanazavàn'i Gorkem Sen, mpamorona ilay zavamaneno.
Tao anatin'ny fikatsahany feo azy manokana nandritry ny enina taona no namoronan'i Gorkem ny Yaybahar. Natosiky ny aingam-panahy te-hanana ny feo azy manokana miainga avy amin'ny karazana zavamaneno rehetra ity mpiangaly mozika, 33 taona ity : ny didgeridoo Aostraliana, ny Ney Tiorka ary, ny tena manan-danja indrindra, ilay amponga varatra. Fitaovana kely kiboribory ilay amponga varatra, izay misy toy ny hoditra roa mihenjana ampifandraisin'ny vimiaina iray. Rehefa kitihana ilay izy, dia manome feo avo, manako, toy ny varatra miraondraona — ary toy ny Yaybahar.
Goavana ny Yaybahar — mameno ny efitrano fandraisana vahinin'i Gorkem. Mifatotra aminà vimiaina roa lavabe ireo toy ny hoditra nenjanina, izay miara-mitrena raha vantany vao voakitika. Tazonina amin'ny tahony avobe ireo vimiaina – toy ny gitara na ny lokanga, saingy roa ihany no tadiny.
Taorian'ireo andrana marobe sy tsy fahombiazana dia hitan'i Gorkem fa rehefa kitihany amin'ny tapakazo fively amponga ireo hoditra voahenjana, manakoako ny feo. Rehefa ny rantsan-tànany no asosany eo mamonjy ny faritra ambany amin'ilay vimiaina, dia feo toy ny “whoosh” avy aminà tontolo hafa no azony. Ary rehefa iray amin'ireo tangolika amin'ilay vimiaina ery akaikin'ny tahony fametraka akaikin'ny tenda no kitihany, “pew” no feo omeny — toy ny feo azo avy amin'ireny fitaovam-piadiana mampiasa lazera ireny.
Tena mahafinaritra — saingy mozika ve moa izy ity? “Tany ampiandohany izany hoe Yaybahar izany dia feo tena faran'izay ratsy. Feo ratsy no avoakan'izany,” hoy i Gorkem manaiky. Saingy nivoatra ilay izy taorian'ny enina taona nanaovana fampiharana sy fanatsaràna betsaka natao tamin'io zavamaneno io ihany. “Ankehitriny, manana endrika mozika kokoa izy. Feo mozika kokoa izy ankehitriny.”
Miaraka amin'ny fahaizany milalao azy io, misy tangolika 30 amin'ilay zavamaneno ary hoditra nohenjanina mamonjy ery ambanin'ireo Yaybahar roa misy vimiaina lalaovin'i Gorkem androany.
Ireo tangolika mitsamboatra no tena mitàna toerana goavana amin'ilay feo toka-miavaky ny Yaybahar — mandeha ho azy araka izany raha avy amin'izy ireo no nakàna ny anaran'ilay fitaovana. “Ny tangolika amin'ny vimiaina dia ‘yay,’” hoy i Gorkem manazava. Ny “Bahar” koa midika lohataona— toy ny amin'ny vanintaona. Zava-dehibe ho an'i Gorkem ny fiheverana fiainana iray vaovao, fanombohana iray vaovao, hoy izy.
Iray amin'ireo hira tena ankafiziny ny Gnossienne No. 1 an'ilay Frantsay mpamoron-kira, Erik Satie. Raha ny mahazatra dia amin'ny piano no iangaliana ilay hira. Ho an'ny Yaybahar, hazo malefaka no ampiasain'i Gorkem eny ambonin'ireo tangolika, toy ny olona mitendry lokanga. Feo manako, manankarena no vokatr'izany, izay toy ny tsapa miditra lalina any anaty sofinao any. “Rehefa mihaino mivantana azy ianao dia tena mamokatra mihitsy, toe-po tena tsara ary lantom-peo tena tsara no mameno ny tontolo,” hoy i Gorkem. “Tena matsiro ho an'ny sofina tokoa ilay izy.”
Tato ho ato dia nitety an'i Tiorkia sy Eoropa i Gorkem sy ny Yaybahar-ny. Tian'ireo mpanatrika izy ity, hoy izy. Na dia ekeny aza fa mbola mety ho ny kiry te-hahalala zavatra no betsaka. Saingy amin'ny hoavy, azony atao ny hahita azy io ho lasa sokajy vaovao amin'ny resaka zavamaneno. Mandra-pahatongan'izay aloha, tian'i Gorkem ny hifantoka kokoa amin'ny fahafantarana ny tena mety ho zavabitan'ny Yaybahar, sy izay feo rehetra azony omena.
6 ora izayArabia Saodita